Maxay ku kala duwanyiihin Guurka Garoobada iyo kan Gabdhaha?! | Gaaloos.com
Home » galmada » Maxay ku kala duwanyiihin Guurka Garoobada iyo kan Gabdhaha?!
Maxay ku kala duwanyiihin Guurka Garoobada iyo kan Gabdhaha?!
Inkastoo guurka calaf yahay jeceylkana da” u gaar ah laheyn ayaa hadane waxaa jira dhibaatooyin sababa guurka la guursado dumarka garoobka ah kaasoo inta badan khilaaf aan joogsi laheyn sababa.
Title: Maxay ku kala duwanyiihin Guurka Garoobada iyo kan Gabdhaha?!